Nkụzi ụgbọala-eletrik - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (NHỌMỌDỤ SPECIALIZATION ỌKỤRỤ // FULL-Oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
NKWỤKWỌ NDỊ NKWUKWỌ 7E KWA
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Afọ 7e maka iche iche > Egwuregwu Nchekwa onwe
Na Afọ 7e maka izu ike Auto-Electricity (full-time / BSO) ị na-amụta iji chọpụta njehie nchọpụta kọmputa na-achịkwa kọmputa na sistemụ kọmputa nke ụgbọ. Ị na-amụtakwa usoro iji dozie nsogbu ahụ. Ọ bụ ezigbo ọzụzụ bara uru. Site na mmezu nke ihe, oru ngo na nlekota oru ị kwadoro na ị bụ nhazi kachasị mma ma debe ụgbọ ala ọ bụla.
Ị na-achọ igodo maka ụgbọala? Ị na-achọ ụgbọala mara mma ma chọọ ịmara otú ụgbọ ala ahụ si arụ ọrụ? Ị dị njikere ịmụta ihe site n'omume, ọ bụ na ị naghị ajụ ọrụ nkịtị?
Ịnwere ike ịbanye naanị afọ 7 ma ọ bụrụ na ị nwetalarị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Dị ka o kwesịrị, ị natara ọzụzụ n'oge ntanetịime: Auto arụzi of Ụlọ ọrụ Mechanics Car abụọ. Ị nwere ọgụgụ isi n'ozuzu ya mana anaghị elelị akụkụ nke ọrụ ahụ. E kwuwerị, ugbo ala nke oge a jupụtara na teknụzụ na teknụzụ ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị gafee usoro a ị ga-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị ma ị bụ ígwè ọrụ ụgbọ ala zuru ezu. Ị nwere ike ịmalite ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị. I nwekwara ike ịga n'ihu na-amụ ihe. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ ebe a.